Hal-ku-dhig: Ciyaarta xayeysiinta ee naga dhigeysa inaan xusuusano sumadaha | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Design Graphic
Calaamadaha badanaa looma aqoonsana waxa ay yihiin laakiin sida looga iibiyo dadweynaha iyadoo la adeegsanayo a dadweynaha soo jiidasho badan ama ka yar soo jiito dareenka iyadoo la adeegsanayo xeelado kala duwan marka wax la iibinayo. Dhammaan qalabka aan ku naqaanno xayeysiinta, waxaa laga yaabaa in kuwa ugu caansan ay yihiin slogan, halkudhigga ama macaan Waa cinwaan hoosaad la socda astaan ​​ujeedkeedu yahay gudbinta farriin la xiriirta sumadda.
Maanta waxaan ka heli karnaa noocyo badan oo noocyo iyo badeecooyin ah halkaas oo ay ugu mahadcelinayaan dhammaan hal-abuurayaasha xayeysiinta ah ee tuujiya qumbaha waxaan ka helnaa noocyo badan oo kala duwan halku dhigyo soo jiidasho leh taas oo lagu duubay maskaxdeenna, taas oo naga dhigaysa inaynu xusuusanno intaan noolnahay. Yaa xasuusan halkudheggii caanka ahaa ee Nokia «isku xidhka dadka », shirkad guur guura oo halkudhigeedu yahay isku xirka dadka, halku dhig runtii aad u weyn oo sumcadaada kor loogu qaadayo.
Isku xirka dadka halkudhig adag.
Noocyo kale sida Nestle oo leh alaabteeda Kik-Kat ayaa abuuray halkudhig "Neef qaado, qaado kik-kat"Hal-ku-dheggan runti si fiican buu u shaqeeyaa maxaa yeelay kit-kat waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay badeecad fudud oo la cuno inta lagu jiro xilliyada nasashada iyo nasashada waxay la xiriirtaa nasashada. Ma yahay fudud y fudud in la xasuusto inay yihiin laba astaamood oo aasaasi ah hal ku dhig kasta.
Jaantuskaan waxaan ku aragnaa hal-ku-dhigga sheyga kit-kat.
Qaarkood waa sidaas xoog leh kaas oo maareeya inay naga dhigaan inaan u dhaqanno si la mid ah sida xayeysiinta, sida barta astaanta BMW oo leh halkudhig "Ma jeceshahay wadista?" fudud, soo jiidasho leh oo leh xoog ku filan oo naga dhigaya inaan daaqadda ka baxno oo aan nidhaahno isla weedha.
Marka la samaynayo halhays, waa inaan marka hore ogaano sida sumadu tahay iyo waxa ay rabto inay ku gudbiso fariinteeda, talaabadani waa mid lama huraan ah si loo gaaro natiijo wax ku ool ah.
Waxaan awoodnaa inaan xasuusano hal-ku-dhigyada noocyada waaweyn, laakiin ma awoodi karnaa inaan aqoonsanno haddii lagu dabaqo noocyo kale? Si loo xaqiijiyo tan, taxane ah naqshadeynta xayeysiinta ayaa la sameeyay halka halkudhigyada noocyada taxanaha ah lagu dabaqayo sumcad khiyaali ah Durx.
Ma aqoonsan tahay dhammaan noocyada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Ciyaarta halhayska